STEERING KNUCKLES Mpanamboatra sy mpamatsy - China STEERING KNUCKLES Factory
28313SC010 sy 28313SC011 STEERING KNUCKLES Ho an'i Subaru -Z1253
Ny knuckle mamily dia iray amin'ireo ampahany lehibe amin'ny fampiatoana ny fiara sy ny rafitra familiana. Izy io dia manao asa ilaina maro, anisan'izany manampy amin'ny fitarihana ny kodiarana. Ianaro ny momba ny knuckle familiana ao anaty fiara eto izay dinihinay ny anjara asany, ny fitaovana ampiasaina hanamboarana azy sy ny karazany, ankoatry ny lohahevitra hafa. Inona no atao hoe steering knuckle ao anaty fiara? Azo inoana fa efa naheno an'izany ianao, angamba voatery nanolo ny fiaranao, na nivarotra izany tao amin'ny fivarotanao fiara. Fa inona ny knuckle mamily ary inona ny doe ...
OEM 6L2Z5B759AG sy 6L2Z5B759A FITIAVANA STEERING For Ford-Z1262
1.TANGRUI dia manamboatra sy mamatsy knuckles mamily kalitao tsara indrindra ho an'ny tsenan'izao tontolo izao. Ireo singa mandeha amin'ny fiara rehetra avy any TANGRUI dia natsangana mba hananana fenitra OE henjana, ary ireo tohotra familiana vokarintsika dia tsy misy ankanavaka. Io no iray amin'ireo antony mahatonga anao hijanona ho iray amin'ireo mpamatsy familiana fitokisana indrindra manerantany. Ankoatra ny famolavolana knuckle familiana tokana dia azonao atao ny matoky anay hanao vokatra manome tolotra tsy manam-paharoa sy androm-piainana lava kokoa. 2. Ho an'ny knuckles mamily izay guaran ...
Integra Steering Knuckle Ho an'ny ACCENT 1995 (Front) -Z1370
Knuckle familiana eo anoloana ankavia ho an'ny Aveo Chevrolet-Z1571
Ny ampahany amin'ny fehin-kodiarana amin'ny steering knuckle steering dia mampifandray ireo singa mamily sy mampiato. Araka izany dia misy faritra ampiarahina amin'ireo faritra sy fivondronan'ny rafitra fampiatoana na familiana. Ny kodiarana koa. Ny ampahany lehibe amin'ny familiana dia misy ny fipetrahana eo ambonin'ny bearings ho an'ny baolina na ny lavaka fantsom-bozaka ho an'ny sandry fanaraha-maso ambony amin'ny fampiatoana ny vatan-kazo ary ny fivezivezena ho an'ny karazana fampiatoana MacPherson ho an'ny tsorakazo na ny fametahana ny sandry ho an'ny baolina miaraka na ny sandry ambany.
4230506130 MIFOHAZA STEERING Ho an'ny Toyota Avalon-Z1254
96488824 KNUCKLES STEERING Ho an'ny DAEWOO LACETTI-Z1263
Universal Steering Knuckle ho an'ny Subaru Forester -Z1330
Tangrui Front Wheel Steeing Knuckle ho an'ny Volkswagen Beetle-Z2271
Ny alàlan'ny alim-baravarana alimina alim-baravarana alim-baravarankely Knuckle-Z1432
Hub misy kodiarana, Shock Absorber fingotra, Hood Shock Absorber, Tyre Ball Joint, Knuckle familiana eo aloha, Shock Absorber Bolt,